युएइबाट नेपाली युवतिकाे यस्ता प्रश्न | mulkhabar.com
युएइबाट नेपाली युवतिकाे यस्ता प्रश्न
April 18, 2019 | 3:42 pm 67 Hits
युएई, ५ बैसाख ।
भैरहवा अञ्चरपुकी सरिता गिरीको बुबाको अघिल्लो वर्षको माघमा निधन भयो । विदेशमा कार्यरत गिरी बुबाको निधन हुँदा तत्काल घर जान सकिनन् । कारण थियो, घरेलु कामदारलाई छुट्टिमा आएपछि पुनः र्फकन नपाउने सरकारी नीति ।
सरिता ५ वर्षदेखि युएईमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छिन् । देशमा बसेर परिवार पाल्न कठिनाइ भयो । त्यसपछि उनी रोजगारीका लागि युएई आइन् । यहाँ राम्रो सेवासुविधा र काम पाएकी छिन् । तर, यो कुरा हाम्रो सरकारले किन बुझ्दैन ? सरिताको असन्तुष्टि सरकारसँग छ । उनी भन्छिन्, ‘दुःख पाएकाहरुलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । हामीलाई यहाँ राम्रो छ । तर, हामीमाथि नै अन्याय किन रु दुःख पाएको भए किन आउने थियौँ र रु भारतीय बाटो प्रयोग गरेर आउन पाइरहेका छन् नि रु’
‘भाग्यले साथ दिए फर्किएर आउछु’ यहीँ निर्णयका साथ उनी छुट्टिमा नेपाल गइन् । जाँदा नेपालकै एयरपोर्ट प्रयोग गरिन् । तर, र्फकने बेलामा भारतीय एयरपोर्ट प्रयोग गर्न बाध्य भइन् ।
सरकारलाई सरिताको प्रश्न छ – हाम्रो कुरामा विश्वास नलागे रोजगारदाता मार्फत बुझे हुन्छ । के हामीलाई गरिखान नदिने हो रु हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड किन सरकार ?
घरमा एक बच्चा, श्रीमान र आमाबुबा छन् । परिवारसँग फोनमा दिनहुँ कुरा हुन्छ । उनीहरुको एउटै प्रश्नउत्तर बारम्बार दोहोरिन्छ । घर कहिले आउने रु सहजै र्फकन पाए त आउने थिए नि १ परिवारलाई दिने उनको जवाफ यहीँ हो ।
रीतालाई परिवारका सदस्यलाई जस्तै व्यवहार छ । सेवासुविधा राम्रो छ । वर्षमा एकपटक घर जान आउन टिकट मिल्छ । ‘नेपाल गएर र्फकन मिल्ने भए वर्षैपिच्छे जान मन छ । तर, सरकारले आउन दिदैन । के गर्ने रु’ दुखेसो पोख्दै भन्छिन्, ‘यहाँ राम्रो काम भएर त आउन खोजेको हो । तर हाम्रो कुरा किन सुनिदैन ?’
उनलाई कहिलेकाही सधैकालागि नेपाल र्फकने सोच आउँछ । तर, उता गएर के गर्ने रु परिवारको जिम्मेवारी पनि छ । यहीँ बाध्यताले अड्काउने गरेको छ ।
घरेलु महिलाको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिदै समाधान गरिने मन्त्रीले आश्वासन पनि दिइन् । तर, त्यो आश्वासन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ रु सम्बन्धित प्रश्नकर्ताहरुले प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन् ।
(अनलाइनखबरमा प्रकाशीत सामग्री सान्दर्भिक लागेर साभार गरिएको )
साउदीमा २२ नेपाली युवा अलपत्र, दुतावासको वेवास्ता, सहयोगको लागि अपील
काठमाडौं, १७ कात्तिक । नेपालबाट रोजगारीको लागी साउदी पुगेका २ दर्जन नेपाली युवाहरु अलपत्र परेका छन् । साउदीको दमाम अल…
विदेश जाने युवामध्ये ४५ प्रतिशत विदेश जानुअघि नै शोषणमा
साउदीबाट डिपोर्टेसनमा रहेका २१ नेपालीकाे यसरी भयाे उद्धार
साउदीबाट नेपालीहरुले गरे यस्तो हृदयविदारक अपील (भिडियोसहित)